Xildhibaano Qas iyo foowdo ka dhex wada baarlamaanka Somaaliya - Wargeyska Faafiye
Home 2014 November 11 .Warka Xildhibaano Qas iyo foowdo ka dhex wada baarlamaanka Somaaliya
Xildhibaano Qas iyo foowdo ka dhex wada baarlamaanka Somaaliya
November 11, 2014 · by	Liban Farah ·
Xildhibaano katirsan Baarlamaanka Soomaaliya ayaa kulamo ay ku yeesheen Magaalada Muqdisho malamihii lasoo dhaafay, waxa ay isku raaceen in foodo iyo qas ka dhax wadaan fadhiyada Baarlamaanka Soomaaliya si uu dib u dhac ugu yimaado mooshinka ka dhanka ah R/Wasaaraha.
Xildhibaanadan ayaa u badan kuwa Siyaasad ahaan taageersan R/Wasaaraha Soomaaliya kana soo horjeeda mooshinka laga gudbiyay, waxa ayna go’aansadeen markii ay ogaadeen in laga tiro badan yahay in xaalada ay dhan kale u rogaan ayna qas ka dhax bilaabaan fadhiga Baarlamaanka.
Kulankii ay Maanta Baarlamaanka ku balansanaayeen in ay ku yeeshaan Xarunta Golaha Shacabka ayaa baaqday kadib markii buuq iyo foodo madasha ka bilaabeen Xildhibaanada kasoo horjeeda Mooshinka taageeradana u haya R/Wasaaraha Soomaaliya.
Xildhibaan katirsan Baaramaanka Soomaaliya ayaa sheegay in Xubnaha foodada ka dhax wada Baarlamaanka ay gaarayaan labaatameeyo ,kuwaa uu sheegay in ay isku balansadeen in qas iyo jahwareer galiyaan kulamada Baarlamaanka si sumcada Baarlamaanka ay hoos ugu dhacdo.
Sida aan Wararka ku heleyno Xildhibaanada Taageersan R/Wasaaraha maantana qaska ka sameeyay kulanka Baarlamaanka ayaa u badnaa Xildhibaanadii kamidka ahaa Baarlamaanadii KMG, kuwaa oo si fiican u yaqaan howlaha nuucaan oo kala ah.
Waxaa laga cabsi qabaa in foodada iyo qaska ay halkooda kasii socdaan kulamada kale ee Baarlamaanka Soomaaliya yeelanayaan hadii aan xal kale la helin , waxaana arimahan hadii ay sii socdaan uu cagta saari doonaa Baarlamaankan hada jira halkii ay ka baxeen Baarlamaankii KMG ahaa .
Gabar Soomaali ah oo ka Mid Noqotay Booliisk Edmonton.
Jeceel ONLINE ah oo Khasaare Badan Geeystay.. Sidee wax u dhaceen ? Halkuu ku dambeeyay ?
Police ka Kenya oo Ka shakiyey wada shaqeeynta al-shabaab iyo MRC
Australia's asylum debate viewed from Kenya's Dadaab refugee camp.